बाइबलका कथाहरू: बालक येशू मन्दिरमा - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
हेर त, यो केटोले कति मज्जाले पाको मान्छेहरूसित कुरा गरिरहेको छ। उनीहरू यरूशलेममा परमेश्वरको मन्दिरका शिक्षकहरू हुन्। यो केटोचाहिं येशू हुनुहुन्छ। उहाँ अब हलक्कै बढिसक्नुभयो। अहिले उहाँ १२ वर्षको भइसक्नुभयो।
बाइबलमा लेखिएका कुराहरू र परमेश्वरबारे येशूलाई धेरै जानकारी भएको देखेर शिक्षकहरू छक्क पर्छन्। तर मरियम र यूसुफचाहिं खोइ? तिनीहरू त यहाँ छैनन् नि?
यतिबेलासम्ममा यूसुफका धेरै छोराछोरी भइसकेका थिए। अब उनीहरूले येशूका भाइबहिनीहरूको पनि हेरचाह गर्नुपर्छ। निस्तार चाड मनाइसकेपछि यूसुफ र मरियम आफ्ना छोराछोरीलाई लिएर आफ्नो घर नासरत फर्कन्छन्। येशू पनि अरूसँगै आइरहनुभएको होला भनी उनीहरू सोच्छन्। तर दिनभरि हिंडिसकेपछि बेलुकीतिर येशूलाई खोज्दा उनीहरूले कतै भेट्टाउँदैनन्। उनीहरूले येशू आफ्ना नातेदारहरू अनि साथीहरूसित पो हुनुहुन्छ कि भनेर खोज्छन्। तर त्यहाँ पनि भेट्टाउँदैनन्! त्यसपछि उनीहरू उहाँलाई खोज्न यरूशलेम फर्कन्छन्।
निकै बेर खोजेपछि उनीहरूले बल्ल येशूलाई शिक्षकहरूसित फेला पार्छन्। उहाँ ती शिक्षकहरूले भनेको कुरा सुन्दै अनि प्रश्न पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो। येशूलाई यति समझदार देखेर सबै जना छक्क परिरहेका थिए। मरियमले येशूलाई यसो भन्छे: ‘बाबु, तिमीले हामीलाई किन यसो गरेको? तिम्रो बुबा र म तिमीलाई खोज्दा-खोज्दा कति चिन्तित भयौं।’
येशूलाई परमेश्वरबारे सिकाउने ठाउँमा जान असाध्यै मन पर्थ्यो। के हामी पनि त्यस्तै हुनु पर्दैन? नासरतमा हुँदा येशू हरेक हप्ता यहोवाको उपासना गर्न सभाहरूमा जानुहुन्थ्यो। सधैं ध्यान दिएर सुन्ने गरेकोले उहाँले बाइबलको थुप्रै कुराहरू सिक्नुभयो। हामी पनि येशू जस्तै हुनुपर्छ।
चित्रमा येशू कति वर्षको हुनुहुन्छ? उहाँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ?
हरेक वर्ष युसूफ आफ्नो परिवारलाई लिएर कहाँ जान्छ?
घर जान एक दिनको बाटो हिंडिसकेको भए तापनि युसूफ र मरियम किन फेरि यरूशलेम फर्कन्छन्?
युसूफ र मरियमले येशूलाई कहाँ भेट्टाउँछन् र त्यहाँ मान्छेहरू किन छक्क पर्दैछन्?
येशू आफ्नी आमा मरियमलाई के भन्नुहुन्छ?
परमेश्वरबारे सिक्ने सम्बन्धमा हामी कसरी येशूजस्तै हुन सक्छौं?
लूका २:४१-५२ पढ्नुहोस्।
व्यवस्थाअनुसार वार्षिक चाडमा लोग्नेमान्छेहरू मात्र अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने भए तापनि युसूफ र मरियम दुवै यरूशलेमको मन्दिरमा गएर अहिलेका आमाबाबुको लागि कस्तो राम्रो उदाहरण बसाले? (लूका २:४१; व्यव. १६:१६; ३१:१२; हितो. २२:६)
आफ्नो आमाबाबुको अधीनमा बसेर येशूले आजका केटाकेटीका लागि कस्तो राम्रो नमुना बसाल्नुभयो?
मत्ती १३:५३-५६ पढ्नुहोस्।
येशूका कुन चार भाइहरूको नाउँ बाइबलमा दिइएको छ र पछि तिनीहरूमध्ये दुई जनाले मसीही मण्डलीमा कस्तो जिम्मावारी पाए? (मत्ती १३:५५; प्रेरि. १२:१७; १५:६, १३; २१:१८; गला. १:१९; याकू. १:१; यहू. १)